UTORRENT ကနေကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားဘယ်လိုနေသလဲ? - SKYPE ကို - 2019
အဘယ်သူသည်ကွန်ပျူတာ, အင်တာနက်နှင့် disk ပေါ်မှာ Windows ကိုပြေးနေသည်ရှိပါတယ် - နီးပါးဆက်ဆက် program ကို uTorrent ကိုအသုံးပြုပါ။ အများစုမှာဒီ utility ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိကွဲပြားခြားနားသောခြေရာခံ, တစ်လွှားဖြန့်ဝေသူအများစုဟာရုပ်ရှင်, ဂီတ, ဂိမ်းများ, ။
ဗားရှင်း 3.2 မှကျနော့်အမြင်အတွက်အစီအစဉ်၏ပထမဦးဆုံးဗားရှင်းကြော်ငြာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေဆံ့မခံခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်သူမတစ်ဦးအခမဲ့ပရိုဂရမ် developer များဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကိုအနည်းဆုံးအချို့အမြတ်ခဲ့ကြသည်ကြော်ငြာများတည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ထိုသူတို့အဘို့ဖြစ်နိုင်ပါကကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း, ခဲ့ပါဘူးအတော်များများသည်အသုံးပြုသူများ uTorrent ကနေကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည့်အပြင်အဆင်များ, ဝှက်ထားပါပြီ။
ဒါ, uTorrent အတွက်ကြော်ငြာများကို turn off ဖို့ဘယ်လို?
ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စဉ်ကို uTorrent software ကိုဗားရှင်းအဘို့အသင့်လျော်သည်: 3.2, 3.3, 3.4 ။ , ကိုစတင်အစီအစဉ်ကိုဆက်တင်များသို့သွားပြီးလျှင်, "Advanced" tab ကိုဖွင့်လှစ်ရန်။
(ထိုကိုးကားစင်တီမီတာမပါဘဲ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Screenshot) ယခု string ကို "filter ကို" မိတ္တူများနှင့်ငါးပိ "gui.show_plus_upsell" ။ ဒီ option ကိုတွေ့ခံရဖို့ဖြစ်တဲ့အခါ - ရုံ (သင်မပါဖို့ဟုတ်ကဲ့နှင့်အတူထို program ၏ရုရှားဗားရှင်းရှိပါကမှားယွင်းသော / သို့မဟုတ်မှစစ်မှန်တဲ့အကူးအပြောင်း) ကကို turn off
Next ကို, သင်သာအခြား parameter သည် (ကိုယ့်မိစ္ဆာအပေါ် switch ကိုထားက disable) အတွက်, တူညီတဲ့စစ်ဆင်ရေး ne ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တဖန်သင်တို့ကိုပြောင်းလဲချင်သောနောက်ဆုံး option ကို: မယ့် (အယူမှားသို့ပြောင်းရန်) ကကို turn off ။
ပြီးတာနဲ့ setting များကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ - ထို program uTorrent restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြော်ငြာ: နှင့် (ဖိုင်စာရင်းကိုအထက်) ကို window ၏ထိပ်ပေါ်မှာ left အောက်ခြေမှာတစ်ဦးနဖူးစည်းစာတန်းပေမယ့်ကြော်ငြာစာသားကိုလိုင်းများသာရှိပါလိမ့်မည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ။
အခုတော့ uTorrent ကြော်ငြာကိုပိတ်ထားသည် ...
အတော်များများကသွားတာ uTorrent အကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်လည်း Skype ကို (ထိုအစီအစဉ်တွင်ချွတ်ကြော်ငြာအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဘလော့ဂ်ပေါ်ခဲ့) အကြောင်းကိုသာမေးကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့အထဲကရွေးချယ်လျှင်ထိုအ appendage အတွက်, သင်၏ browser ကိုအဘို့ဤလုပ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ -
စကားမစပ်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြှနျုပျအဘို့, ဒီကြော်ငြာဟာလေးနက်အတားအဆီးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ပို. ပင်ဆိုရလိမ့်မယ် - သူကအများအပြားအသစ်ကဂိမ်းနှင့် apps ၏ output အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးသည်! ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲကြော်ငြာမဟုတ်ပါ - မကောင်းသော, ကြော်ငြာ (သာကွဲပြားခြားနားမှာရှိသမျှတို့, ကံမကောင်းတိုင်းတာ) ဖြည့်ညှင်းအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။